Maxaad ubahantahay inaad ka’ogaato hada Corona ha (Somali)
per E-Mail teilen, Maxaad ubahantahay inaad ka’ogaato hada Corona ha (Somali)
per Facebook teilen, Maxaad ubahantahay inaad ka’ogaato hada Corona ha (Somali)
Twitter, Maxaad ubahantahay inaad ka’ogaato hada Corona ha (Somali)
Talooyinka caafimaad iyo dhaqan
Shaqo iyo Lacag
Soo galista iyo ka bixista
Difaaca lagaga hortagayo rabsho
Qof kastaa, isagoo tallabo qaadaya, wuxuu naftiisa iyo dadka kale ka caawin karaa, gaar ahaan dadka nugul, sida dadka da'da ah iyo kuwa qaba xaalado caafimaad darro, inay iska ilaaliyaan Koronafayras. Siyaasad-dejiyayaashu waxay qaadeen tillaabooyin ay ku yareynayaan faafitaanka fayraska, si ay u khafiifiyaan culayska saaran xarumaha daryeelka caafimaadka iyo in ay wax ka beddelaan cawaaqibka dhaqaale ee lala xiriiriyo cudurkan safmarka ah. Dawladdu waxay kula socodsiin doontaa heerka uu hadda marayo Koronafayraska iyadoo la adeegsanayyo qaabab kala duwan iyo luuqado kala duwan. Waxaan halkan kuugu soo uruurinay macluumaadka ugu muhiimsan.
Kuwa soo socda sidookale waa la dhaqangaliyaa: Yaree ku dhawaanshaha dadka kale sida ugu macquulsan oo naftaada ku xadid koox dad oo joogto ah. Maaskaro waa in lagu xirtaa goobaha xiran oo dadku isugu yimaadaan.
Xirashada maaskaraha ee khasabka ah waxay khusaysaa xarumaha daryeelka kalkaalinta, isbitaalada iyo xarumaha kale ee daryeelka caafimaadka, iyo sidoo kale guryaha bulshada qaarkood iyo gaadiidka dadweynaha. Xirashada maaskaro inta aad saaran tahay gaadiidka rakaabka masaafada fogfog iyo diyaaradaha sidoo kale waa khasab.
Baaritaanada Koronafayras: Gelitaanka xarumaha daryeelka kalkaalinta, isbitaalada, dugsiyada iyo xarumaha xanaanada ama machadyada kale waxa kaliya oo loo ogolyahay qof leh natiijo baaritaan oo taban (negatiif ah). Intaa waxaa dheer, baaritaano isdaba-joog ah oo degdega ah ayaa ah qayb muhiim ah oo awood noo siinaysa inaan ku soo laabano nolosheena caadiga ah iyo xiriir badbaadada leh oo aan la yeelano dadka kale. Gudaha Jarmalka, qof kastaa wuxuu awoodaa inuu helo baaritaan isdabajoog ah oo degdeg ah oo bilaash ah ugu yaraan hal mar todobaadkiiba.
Goobaha ugu daran: Haddii nooc fayraska kamid ah oo khatar ah ku faafo ama cadaadis culays saaro isbitaalada sababtuna tahay tiro badan oo caabuqyo ah, tani waxa ay ku keeni kartaa deegaanka xaalad caabuqa oo khatar ah. Dawladaha federaalku waxay markaa ka dib qaadi karaan tallaabooyin kahortag dheeraad ah.
Tallaabooyin Kahortag ah: Tallaabooyinka kahortagga suurtagalka ah oo loogu talogalay goobaha loogu yeero meelaha khatarta ah waxaa ka mid ah waji-xirka khasabka ah iyo kala fogaanshaha bulshada illaa 1.5 mitir marka la joogo goobaha dadweynaha. Xarumaha iyo shirkadaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan caddaynta tallaalka, soo kabashada ama baaritaan si aad u gasho.
3G: dadka sida buuxda uga soo bogsaday Corona, kuwa sida buuxda loo talaaley ama kuwa la tijaabiyey ayaa marin u heysta
2G: kuwa kasoo bogsadey Corona ama kuwa sida buuxda loo talaaley ayaa marin u haysta
2G plus: dadka qaba Corona gii hore ama kuwa sida buuxda looga tallaaley ayaa marin u haysta haddii la tijaabiyey (Dadka qaatay tallaalka xoojiyaha uma baahna baaritaan)
Ogoow shuruucda quseysa taada Dawlada Federaalka.
Waxaad kaheli kartaa talooyinka dhaqamada caafimaadka qaab luuqado badan ah Wasaarada Caafimaadka ee Federaalka.
Sida malaayiin dad ah oo Jarmalka ku noolba, isticmaal apka digniinta Corona ee Dawlada Federaalka. Xadba inta dad badan ka qaygala, ayuu apka uu waxtar ugu leeyahay inuu na difaaco.
Tallaalka corona waxaad kaabi kartaa difaaca naftaada, qoyiskaada iyo kuwa ugu nugul. Qofwalba oo goobtooda deegaan ama goobta ey iska joogaan eytahay Jermalka ama ka shaqeeya goobaha qaar ee daryeel ee Jermalka, laakiin aan ku nooleyn halkan, ayaa xaq uleh tallaalada.
Booster vaccination: Guddiga Tallaalka Istaaga ee (STIKO) ayaa ku talinaya tallaal xoojin ah ee loogu tala galay dadka gaarey iyo ka waynba 12. Tallaalka xoojinta ayaa caadiyan la bixiyaa abaare 3 bilood kadib tallaalka labaad.
Kuurooyinka xoojinta ah ayaa si gaar ah ugu haboon:
Dadka xanuunnada hore qabay
Dhammaan dadka u baahan daryeelka
Dadka lagu talaalay tlllada faraca ah (tusaale, AstraZeneca ama Johnson & Johnson)
Dadka adka ula jooga dadka u nugul caabuqa (tusaale, kalkaalisooyinka)
Talaalku waa go”aan shakhsiyeed waxaana lagu bixiyaa si bilaash ah goobaha tallaalka ama xafiisyada diktoorka. Adigoo wacaya khadka tooska ah ee 116 117, waxaad ka war dooni kartaa goobta iyo halka laguugu tallaali karo.
Haddii lagu tallaaley, tallaalkaada corona waxaa lagu qori karaa qaab digitaal ah. Shahaadada kumbiyuutareysan waxaa lagu soo saari karaa xafiiska diktoorka, farmashiga ama goob tallaal. Kadib galinta ama oggolaanshaha xogta, koodh QR ah ayaa abuurma. Kuwa la tallaaley waxey dabadeed isticmaali karaan Appka CovPass ama Appka Corona-Warn inaad iskaan garaysid aadna isticmaashid koodhka QR si aad u xaqiijisid xaaladaada tallaal.
Tallaaladu waxay mareen baaritaan adag dhanka adkaysiga, badqabka iyo waxtarkeeda.
Xogta ku saabsan tallaalada mRNA
(Il: Machadka Robert Koch)
Xogta Tallaalka Vector
Macluumaad ku saabsan tallaallada borotiinka ku saleysan
(Il: Machadka Robert Koch )
Loo-shaqeeyayaashu waa inay xaqiijiyaan in xiriirka ka dhexeeya shaqaalayaasha aad iyo aad loo yareeyo. Nidaam nadaafadeed waa in la soo bandhigaa si loo aasaaso loona hirgeliyo tillaabooyinka ka-hortagga caabuqa ee gudaha shirkadda. Haddii ay lagama maarmaan noqoto in la xirto maskaraha ka hortagga ah, kuwani waa in uu bixiyaa loo shaqeeyaha. Loo-shaqeeyayaasha waxaa laga filayaa inay hubiyaan in dhammaan shaqaalaha, kuwaas oo aan si gaar ah uga shaqayn guryahooda, loo soo bandhigay baaritaanada Koronafayras.
Difaaca ka hortaga xil ka qaadista ayaa sidookale jira inta lagu jiro caabuqa corona. Haddii shaqaaleysiyahaaga uu dalbey shaqo wakhti-gaaban ah, waxaad heli karaysaa gunno shaqo wakhti-gaaban ah muddo ilaa 28 bilood ah. Waxay isugu tagi kartaa ilaa 87 boqolkiiba waxa kaa lumay dakhligaaga. taee Wasaarada Shaqaalaha Federaalka iyo Arrimaha Bulshada waxay bixisaa xog luuqado badan ku baxa ee ku aadan arrimaha sharciga shaqaalaha.
Waxaa sidookale jira gargaar loo fidiyo shirkadaha, iyadoon ku xirneyn siday ey uwaynyihiin. Waxaa jira daymo, deeqo ama canshuur dhimis. Dhamaan xogta waxay ku jirtaa Wasaaradda Arrimaha Dhaqaalaha iyo Howlaha Cimillada ee Federaalka.
Xeerka guud: Safarka aan lagama maarmaanka ahayn waa in laga fogaadaa. Gobolada shakhsiyaadk ah, xitaa EU oo jirta, waxay sii wadi karaan iney xaddidaan soo galista ama ey qasbaan karantiil xiliga soo galista. Fadlan halkan ku wargeli naftaada waxa ku saabsan xayndaabyada soo galista ee haddeertan iyo xakamaynta xuduudaha Auswärtigen Amt iyo halkan Wasaarada Federaalk ee Gudaha.
Dhamaan kuwa Jarmalka kasoo gala goobaha xalista sare ama nooc duwan ee fayraska ah leh waa iney soo gudbiyaan diiwaangelis soogalooti dijitaal ah buuxi
Wadamadan waad ogaan kartaa, waxaa si maalinle ah loogu soo cusbooneysiiyaa Machadka Robert Koch.
Kahor soo-galitaanka: Waa inaad haysataa shahaado tallaal, tijaabo ama kasoo bogsasho ah Marwalbo aad kasoo galayso waddan kale. (tijaabadu waxey noqon kartaa PCR ama tijaabo antigen ah) Sharcigan ah bixinta caddeynta wuxuu quseeyaa qofwalbo oo ka wayn da’ada 12.
Tijaabo sheybaar (PCR, PoC-PCR) ee laga bilaabo ugu yaraan 28 maalmood iyo ugu badnaan 3 bilood ee lasoo dhaafey ayaa ah caddeynta saxda ah ee soo kabashada. Tallaalku waa in la dhamestirey ugu yaraan 14 maalmood ee lasoo dhaafey.
Soo-galitaanka kadib: Sharciyan, qofwalba oo kasoo galaya goob leh nooc duwan ee fayraska ah waa in lagu karantiilaa gurigiisa 14 maalmood. Markaad kasoo galaysid goob leh xalis sare, qofwalba oo aan laga tallaalin ama marhoreba kasoo bogsadey cudurka korona waa la galiyaa karantiil 10 maalmood ah. Karantiilkan waxaa lagu dhameyn karaa iyadoo la marayo tijaabo kale oo ka bilaabata maalinta 5-aad. Carruurta da'doodu ka yar tahay 6 sano ma aha kuwo la karantiilo. Carruurta da'doodu ka yar tahay 12 sano waxay joojin karaan karantiilka isla markiiba ka dib marka ay galaan oo la baaro.
Waxaad ka heli kartaa halkan dhamaan xogta ku saabsan soo gelitaanka Wasaarada Caafimaadka ee Federaalka.
Xaalad gooni ah ee dhamaan qoyiska – tallooyinka looga hortago rabshada guriga dhexdiis iyadoo loo marayo hayndaabyada xiriirka inta ey jirto mudada Corona PDF, 500 KB, barrierefrei
(Il: Dawlada Federaalka Guddiga uqaalbilsan Soogalootiga, Qaxootiga iyo Is-dhexgalka iyo Xarunta Caafimaadka Qowmiyadaha ee eV)